ध्वनि प्रदूषण र नो हर्न – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
ध्वनि प्रदूषण र नो हर्न
२०७७ आश्विन २८, बुधबार ०८:२४ गते
सामान्यतया प्रदूषण भन्नाले दूषित हुन गइरहेको, दूषित भएको वा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने जनाउँछ । बृहत् नेपाली शब्दकोषले प्रदूषणलाई दूषित पार्ने काम, दोषयुक्त पार्ने काम, रोगव्याधि पैदा गर्ने वा स्वास्थ्यमा हानि गर्ने त¤वको सराई भनी अथ्र्याएको पाइन्छ । विकिपेडियामा प्रदूषण भन्नाले कुनै पनि मानवीय गतिविधिका कारण यस संसारका पाँच भौतिक त¤वहरु (पानी, हावा, माटो, आगो र आकाश)मा हुने विकृति अर्थात् असर जसका कारणले पृथ्वीमा भएका प्राणीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ भन्दै विकृतिलाई प्रदूषण भनेको देखिन्छ ।
ध्वनि प्रदूषण भन्नाले ध्वनिमा भएको दूषितपना वा ध्वनिका कारण स्वास्थ्यमा हानिनोक्सानी हुने कुरालाई बुझाउँछ । आवाज सुन्नका लागि मानवशरीरमा भएको कानको क्षमताभन्दा बढी ध्वनि कानभित्र प्रवेश गरेको अवस्थालाई ध्वनि प्रदूषण भन्न सकिन्छ । विज्ञ चिकित्सकहरुको भनाइ छ कि हाम्रो कानले सामान्यतया ८५ डेसिवलभन्दा बढी डेसिवलको आवाजलाई सहजै सहन गर्न सक्दैन । त्यसभन्दामाथि जति जति डेसिवल बढ्दै जान्छ उत्ति नै प्रदूषणको मात्रा बढ्छ र प्रत्यक्षरुपमा कानसम्बन्धी रोग लाग्छ, कानका भित्री नसाहरु सुकाइदिने हुन सक्छ र कान नसुन्ने हुन सक्छ भने यसका अतिरिक्त मानिसमा चिडचिडाहटपन हुने, एकाग्रता नहुने, निद्रा नपर्ने, सुन्न सक्ने क्षमता कमी हुँदै जाने, मानसिक विकासमा असर पर्ने, बालबालिकाको हुर्किने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, दीर्घ बिरामीको अवस्था झनै जटिल बन्ने, रिंगटा लाग्नेलगायतका विभिन्न मानसिक रोगहरुको सिकार बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
कोरोनाको कहरले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटले भोकै मरिन्छ कि भन्ने त्रास, अस्पतालमा उपचार नपाई मरिन्छ कि भन्ने त्रास, एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई देख्दा मनमा हुने त्रास, साँझ घरमा फर्किंदा ठूलाको आशीर्वाद तथा सानालाई माया गर्न नसकी टाढा–टाढा बस्नु परेको अवस्था आदिले मनमा उदासीनता, नैराश्यता छाएको अहिलेको अवस्थामा ध्वनि प्रदूषणले आममानिसलाई झनै पीडा थपिदिएको देखिन्छ । उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्कने कर्कश ध्वनि, चर्को आवाजमा बज्ने साउन्ड सिस्टम आदिले मस्तिष्कलाई खलबलाइरहेको अवस्थामा त्योभन्दा बढी सवारीसाधनहरुबाट आउने हर्नको ध्वनिले झनै असह्य पीडा थपिदिएको छ ।
विज्ञ चिकित्सकहरुको भनाइअनुसार सामान्यतया सवारीको हर्नले ११५ डेसिवलभन्दा माथिको ध्वनि प्रवाह गर्ने गर्दछ । अझै कुनै सवारीमा प्रेसर हर्न प्रयोग गरिएको खण्डमा त १५० डेसिवल नै पुग्न सक्छ । ८५ डेसिवलसम्मको आवाज थेग्न सक्ने हाम्रो कानमा एकैपटक सामान्य हर्नको ११५ डेसिवल र प्रेसर हर्नको १५० डेसिवल आवाज प्रवेश गरेमा के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । जसरी धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ त्यसैगरी ध्वनि प्रदूषण पनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । यसबाट समग्र नेपालीलाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो भने एकआपसमा ध्वनि प्रदूषण हुने कार्य नगरी÷नगराई शान्त र सुसंस्कृत नेपालको निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
सवारीको हर्नलाई असभ्यताको परिचयका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । विकसित देशहरुमा भएको ट्राफिक मुभमेन्टलाई हेर्दा कुनै पनि सवारीमा हर्न छैन कि जस्तो लाग्दछ । सबै चालकहरु आआफ्ना लेनमा हिँडेका हुन्छन् । कसले कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने जानकारी हुन्छ उनीहरुलाई, त्यसमाथि पनि सडक रेखाहरु, विभिन्न ट्राफिक संकेत चिन्हहरु र ट्राफिक लाइटले चालकलाई गाइड गरेका हुन्छन् । सवारी रोक्ने, यात्रु चढ्ने, उत्रने आदि सबै पूर्वनिर्धारित हुन्छन् र त्यसैअनुरुप नै सवारी सञ्चालन हुन्छन् । कसैले सडक अनुशासन पालना गरेन भने उसलाई चेतावनी दिनमात्र अर्को चालकले हर्न बजाउन सक्छ । कसै उपर हर्न बजेमा उसलाई आत्मग्लानि हुन्छ त्यहाँ । तर विडम्बना ! हाम्रो देशमा चालकलाई सडकमा डो¥याउने खालका ट्राफिक संकेत तथा रेखाहरु बन्न सकेका छैनन्, राजधानीमा समेत ट्राफिक लाइट सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन । हर्न बजाउने त अधिकारकै कुराजस्तै गरी कतिपय सवारीको पछाडि हर्न प्लिज भनेर लेखिएको समेत देखिन्छ । विकसित देशका मानिसहरु नेपाल भ्रमणको क्रममा आएको समयमा नेपाल र नेपालीको यो चाला देखेर के भन्छन् होला ? तसर्थ मानवीय स्वास्थ्य, शान्ति र सभ्यताका खातिर नियन्त्रितरुपमा हर्नको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सवारीसाधनको हर्नबाट हुन सक्ने सम्भावित ध्वनि प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा बेलाबेलामा प्रयासहरु नभएका होइनन् । ट्राफिक व्यवस्थापनको नियमनकारी निकाय नेपाल प्रहरीले राजधानीलगायत देशका मुख्य–मुख्य सहरहरुमा ध्वनि प्रदूषण हुन नदिन हर्न निषेधका अभियानहरु सञ्चालन गरेको थियो । केही समय लागू भएका त्यस्ता अभियानहरुले निरन्तरता पाउन भने सकेनन् र क्रमशः हर्नको अवस्था यथास्थितिमा रहन पुग्यो । बलै गरेर भए पनि नेपाल प्रहरीले प्रेसर हर्न नियन्त्रणमा लिने, प्रेसर हर्न राख्ने र बजाउने चालकलाई जरिवाना गर्ने आदि पनि गरेको थियो । त्यसबाट सवारीमा प्रेसर हर्न नराख्ने र राखेको अवस्थामा पनि मानिसको नजिकमा नबजाउने खालको वातावरणको विकास भएको थियो । तर, आमसवारी चालकहरुको बानी नपरूञ्जेलसम्म सञ्चालन हुनुपर्ने त्यस्ता कार्यक्रम बीचैमा सेलाए भने हिजो हर्न नबजाउने चालकहरु पनि अरुको देखासिकीमा हर्न बजाउने भए । बिस्तारै बिस्तारै हर्न नबजाएसम्म त सवारी अगाडि बढाउनै नसकिने जस्तो भएको छ चालकहरुलाई । यस्तो अवस्थामा समयमै यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिएन भने हर्नको कारणबाट झनै ठूलो मानवीय समस्या नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, राम्रो कामका लागि कहिल्यै ढिलो भएको महसुस गर्न हुँदैन भन्ने वाक्यांशलाई आत्मसात् गरी आजैबाट हर्न निषेध अभियानमा लाग्नुपर्ने भएको छ ।
चितवन जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा करिब ३ वर्ष पहिला आमसचेत चितवनवासी नागरिकहरुको चाहना तथा सुझावलाई मध्यनजर गरी त्यसबेलाको प्रहरी प्रशासनले आँपटारीदेखि केन्द्रीय बस टर्मिनल र चौबीसकोठी हुँदै पुल्चोक र पुनः अाँपटारीसम्मको ११.२ किलोमिटर सडकखण्ड र सोभित्रका सबै सडकहरुमा अभियानकै रुपमा हर्न निषेध लागू गरेको थियो भने रत्ननगरको सौराहा क्षेत्रलाई समेत हर्न निषेध गरेको थियो । सबैको सकारात्मक सहयोगका कारण उक्त कार्यक्रम अपेक्षितरुपमा सफल भएको थियो भने भरतपुरमा हर्न बजाउन पाइँदैन भन्ने जानकारी हाइवेमा चल्ने चालकहरुमा समेत भैसकेको थियो । प्रेसर हर्नका सवालमा आक्रामकरुपमा लागेको प्रहरी प्रशासनले हजारौँ प्रेसर हर्नहरु जफतसमेत गरेको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा भरतपुर शान्त थियो भन्न सकिन्छ । बिस्तारै नियमनकारी निकायका लागि हर्न निषेधभन्दा अन्य कार्यहरु प्राथमिकतामा परे र हर्न निषेधको अनुगमन तथा नियमन कार्य बिस्तारै सेलाउँदै गयो र यथाअवस्थामा आइपुग्यो । यसले के पाठ सिकाएर छोड्यो भने नियमनकारी निकायले स्वच्छ मनले चाहेको खण्डमा हर्न निषेध अभियानमा आमदेशवासीको साथ र सहयोग मिल्छ, कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्दछ र ध्वनि प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ, अझै पनि ढिला भएको छैन । आजैबाट ध्वनि प्रदूषण र सोबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे चोक–चोकमा बहस गरौँ, सामाजिक सञ्जालहरुमा बहस चलाऔँ । हाम्री सबैको कानको क्षमता ८५ डेसिवलसम्मको ध्वनिलाई सहन गर्न सक्ने हो, हर्नबाट ११५ डेसिवल र सोभन्दा माथि ध्वनि निस्कन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक छ । सवारीवाट निस्कने ध्वनिले चालकदेखि सुन्ने सबैलाई प्रभावित गर्दछ । यो कसैको हितमा पनि छैन भन्ने कुरामा पर्याप्त जानकारी दिने सचेतनामूलक अभियान चलाऔँ । निश्चित समयको अभियानपश्चात् यसलाई नियमन गरौँ । कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने हर्नको जथाभावी प्रयोग गर्ने तथा प्रेसर हर्नको प्रयोग गर्ने उपर शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ कारबाही गरौँ । यो तत्कालै समाधान हुने समस्या हो, यसका लागि राज्यले ठूलो र छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने पनि छैन, मात्र सम्पूर्ण सडक प्रयोगकर्ताहरुमा धैर्यता र स्वअनुशासको जरूरी हुन्छ । जुन आफूले आफैँमा लागू गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । तसर्थ, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको नो हर्न अभियानमा हामी सबै लागौँ र स्वच्छ तथा शान्त समाजको निर्माण गरौँ ।